JACAYLKA LAMA QARIN KARO! Gacalisadii Ay Kala Tageen John Cena Oo Sheegtay Inay Dili Doonto Gabadha Usoo Dhawaata Saygeeda Hore, Xilli Ay Iyadu Nin Kale Jacayl La Jilayso - Cadalool.com
JACAYLKA LAMA QARIN KARO! Gacalisadii Ay Kala Tageen John Cena Oo Sheegtay Inay Dili Doonto Gabadha Usoo Dhawaata Saygeeda Hore, Xilli Ay Iyadu Nin Kale Jacayl La Jilayso
Nikki Bella oo ka tirsan xiddigaha Musaaricada ayaa waxay ku hanjabtay inay nafta ka jari doonto oo ay dili doonto gabadha ay ku ag aragto John Cena oo ay muddo ka hor kala tageen.
John Cena iyo Nikki Bella ayaa si rasmi ah u shaaciyey inay kala tageen July 2018, kaddib lix sannadood oo ay is qabeen, balse Bella oo magaceeda runta ah uu yahay Nicole Garcia-Colace ayaa waxay xidhiidh jacayl la bilowday heesaagii hore ee Arnem Chigvintsev, iyadoo horraantii sannadkan ay u baxeen dalxiiso si buuxda loogu ogaaday jacaylkooda.
Lama sheegin inay guur ku ballameen iyo in kale, hase yeeshee Nikki Bella ayaa mar kaliya afka furatay usbuucan markii la sheegay in John Cena uu ka fikirayo inuu nolol kale samaysto kaddib furriinkii xaaskiisa hore.
Bella ayaa waxay sheegtay in aanay u dulqaadan karaynin inay aragto Cena oo gabadh kale la socda, waxaanay si adag carrabka ugu xajisay inay qudha ka jari doonto, balse dhinaca kale, kamay hadal nolosheeda gaarka ah iyo xidhiidhka jacayl ee ay la jilayso ninka ay damaashaadka ku wada jiraan.
Nikki Bella iyo walaasheeda ay mataanaha yihiin ee Brie ayaa xilli ay booqasho ku joogaan Napa Valley oo ku taalla California, waxay dib u xasuusatay xilligii ugu dambeeyey ee ay Napa tagto.
Bella ayaa dib u baadhay xusuusaheeda telefoonkeeda gacanta ugu jira, waxaanay dib u daawatay muuqaal ay iska duubeen iyada iyo John Cena markii ugu dambaysay ee ay booqdeen halkaas, waxaana mar kaliya indhaheeda qoysay ilmo.
“Waxay ila tahay in sababtii aan shalay inta badan u ooyey ay tan tahay. Waxa aan dareemay sidii markii iigu horreysay ee aan imid.”
Walaasheed ayaa markaas kaddib weydiisay waxa ay yeeli doonto marka uu John Cena dib ugu soo laabto haasaawaha ee uu go’aansado inuu gacaliso kale raadsado mar haddii ay iyada kala tageen, waxaanay iyadoo cadhaysan tidhi: “Wixii doonaa ha jiraan, marka dambe ee aan arko iyadoo qof la socdo, waxay noqonaysaa dhimasho.”